Maalinta: Oktoobar 1, 2018
Si looga hortago wixii dhibaatooyin ah ee ka dhaca furitaanka garoonka cusub, hay'addeenna; waxay sii wadeysaa tababaradeeda adeegyada duulista hawada, howlgalka, dhismaha, tiknolojiyadda macluumaadka iyo kaabayaasha elektiroonigga ah Mawduuca [More ...]
Dayactirka iyo Dayactirka Doomaha Tareenka
Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka Wadada Tareenka oo Natiijo u ah Tender Republic of Turkey Railways TCDD 3. 2018 / 442565 GCC wuxuu tiriyey Tilmaanta Dayactirka iyo Dayactirka Wadada Tareenka [More ...]
Dhismaha Wadooyinka lugeynaya ee hore ee Wadada tareenka Osmaniye TCDD 6. 2018 / 423026 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegga Iibsiga Gobolka iyo Maareynta Adeegga Xakamaynta Xawaaladda 1.494.029,01 TL [More ...]
01 'Tababbarka iskaashiga bulshada iyo tareenka dhiirrigelinta', kaas oo la bilaabay iyada oo lala kaashanayo TCDD, ayaa loo diray Isniintii xaflad lagu qabtay Xarunta Tareenka ee Ankara. Si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan nooca iskaashiga bulshada ee waddankeenna, in la taageero iskaashiga bulshada, [More ...]
Wasiirka Gaadiidka Turhan wuxuu ka qaybqaatay Tababbarka Iskuduwaha Bulshada iyo Tababarka Tifaftirka
Wasaaradda Ganacsiga iyo Gaadiidka TCDD Co., oo u diyaar garowday iyada oo lala kaashanayo Tababarada Iskaashiga Bulshada iyo Dhiirrigelinta Ankara Gardan ayaa la dejiyay. 1 ee mashruuca su'aasha ah 10 ee Isniinta Oktoobar: Ankara ee 00 [More ...]
Antalya 3. Habeenkii Habeenkii in lagu Dhiso Mashruuca Heerka Tareenka
Duqa magaalada Menderes Türel, 3, marxaladda koowaad ee u dhaxaysa Varsak-Otogar ayaa la qorsheeyay in la dhammaystiro bisha Diseembar. Mashruuca Nidaamka Tareenka Marxaladda, shaqada waa in la dardar galiyaa, iyadoo la kordhinayo tirada kooxaha iyo in la aasaaso xilliyada habeenkii. [More ...]
Panorama of Madaxweynaha 4 Sanno leh Madaxwayne Sahin
Duqa Magaalada Caasimadda ee Gaziantep Fatma Şahin waxay tilmaamtay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee magaalada iyo 4 waxay soo saartay xalka joogtada ah sanadka oo dhan. Sahin, oo ka badbaaday fasalka oo leh hal-ku-dhigga sawirka 'Gaziantep' waa Shaqadeena Shaqada ”wadada uu ku bilaabay Aşk Gaziantep Love, [More ...]
Xilliga E-Buuxinta ee Gaadiidka Dadweynaha ee Konya
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay bilaabatay inay buuxiso elektarooniyiinta loo isticmaalo khidmadaha gaadiidka dadweynaha iyada oo loo marayo internetka marka lagu daro ganacsatada baahsan iyo waababka lacagbixinta ee magaalada oo dhan. Dowladda Hoose ee Magaalada Konya, waxaa loo adeegsaday kharashyada gaadiidka dadweynaha [More ...]
TCDD iyo Iskuduwaha Guriyeynta waa inaan la iibin
Abdullah Peker, Madaxweynaha Udem Hak-Sen, Gaadiidka iyo Midowga Shaqaalaha Shaqaalaha Tareenka. Gobolka iyo TUDEMSAS Lodging ayaa sheegay in Sivas ay muhiimad weyn ka leedahay horumarka, hiddaha iyo dhiirrigelinta Sivas. Peker wuu sameeyaa [More ...]
RayHaber 01.11.2018 Warbixinta Shirka
Kaalmeynta Shilalka Tareenka u dhaxeeya Saldhigyada Aliağa-Tepeköy Ka shaqeeya Qalabka Korontada ee Gawaarida Isgoyska Hore ee Cusbitaalka Garaad Garage
Ka takhalusidda dhibaatooyinka gaadiidka magaalada iyada oo la raacayo mashaariicda ay dhistay Dawladda Hoose ee Magaalada, xaafada Mollafenari oo ku taal badhtanka dhisme dumay badhtamaha waddada. Isgoysyada casriga ah, buundooyinka, iyada oo ujeedadu tahay yareynta dhibaatooyinka gaadiidka ee Bursa, [More ...]
Chi-yun Minra ayaa wiilkiisa ku dhuftey tareen masiibo "dadka mas'uulka ah 12 Usbuuc kasta qoysaskooda b
8 ee degmada Çorlu ee Tekirdağ Shilka tareenka ee dhacay July 2018, raadinta cadaaladda Ms Özra oo lumisay wiilkeedii Oğuz Arda Sel iyo afadiisii ​​hore ayaa sii socota. Degmada Corlu ee Tekirdag [More ...]
Sahin'dan Aktaş'a Soo jeedinta Ray Lacagta
Musharaxa CHP ee duqa magaalada Bursa Metropolitan Necati Sahin ayaa hada ku sugan goobta siyaasada. In kasta oo tan lagu magacaabi karo 'dhicitaan dhicis', digniinta ka timid warbaahinta bulshada ee magaalada waqti ka waqti [More ...]
"Ugu yeerida Wareejinta Adana Metrooga Wasaaradda" Wasaaradda Turan
Isagoo ka jawaabaya baaqa CHP Adana kuxigeenka Ayhan Barut ee ah “Nidaamka Adana Light Rail System in lagu wareejiyo wasaarada Mehmet, Mehmet Cahit Turan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa yiri, jawaab [More ...]